शिशिर भण्डारीलाई के भयो ? सबैलाई सहयोग गर्ने शिशिर हात जोड्दै सहयोग माग्दै आए(भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारशिशिर भण्डारीलाई के भयो ? सबैलाई सहयोग गर्ने शिशिर हात जोड्दै सहयोग माग्दै आए(भिडियो हेर्नुहोस्)
January 4, 2021 admin समाचार 7079
रत्नपार्कको व्यस्त स’डकमा हिड्दै गर्दा मेरो आंखा एक मनै रुवाउने दृश्यमा गयो । रत्नपार्कको अगाडि गेटमा मान्छे’हरुको भिड थियो र त्यहि भिडको अगाडि ५ बर्षको बाबु माईक स’मातेर गीत गाउंदै थिए । छेउमै सानो बाबुको आमा र बुवा थिए । बुवा दृष्टि’बिहिन थिए भने आमा सकुशल देखिन्थिन् । सानो बाबुको गीत सुनेर समय स’मयमा हेर्नेहरुले १०, २० रुपैंया बाबुको अगाडी रहेको एउटा भा’डोमा खसालिदिन्थे ।
निकै मिठो स्वर भ’एका यि बाबुको नाम हो, बसन्त लामा । बसन्तले यसरी गीत गाउन थालेको केहि मि’हना मात्र भएछ । उनको बुवा बुद्ध लामा र आमा युनिका लामासंग कुरा गर्दा थाहा भयो, आफ्नै स्कुलको फि तिर्न पैसा नभएपछि बाबुले सड’कमा गाउन थालेका रहेछन् ।
यो परिवारको कथाले सबैको मन जि’त्यो र शिशिरले यो परिवारको गीत रेकर्ड गरिदिए र भिडियोको सा’थमा ल्याए । रचना रिमाल र कुमार अभिको पनि आ’वाज रहेको गीत यतिबेला चर्चामा छन् । गीतले सबैलाई रुवाएको छ । तर बुष्ट गरेर गीतको भ्युज बढाउने ज’मानामा शिशिको यो गीत ट्रेण्डिंगमा पनि आएको छैन । राम्रो भ्युज पाएपनि गीत ट्रेडिंगमा नआ’उँदा शिशिर दुखी छन् । शिशिरले सबैलाई सह’योग अपिल गरेका छन् । भिडियो हेर्नुहोस्
बले र अनुको ‘कस्तो लाग्यो तिमीलाई’ सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुहोस्)
सबैलाई हसाउने, जादूमय स्वर र मिठो बोलीले भाइरल भएका सचिन परियारले कमाए एक दिनमै १० लाख(भिडियो हेर्नुहोस्)
April 10, 2022 admin समाचार 742
कुलमान छँदा जस्तो बत्ति किन आउँदैन अचेल ? के अघोषित लोडसेडिङ सुरु भएको हो ?
May 25, 2021 admin समाचार 5103
पछिल्ला केही दिनयता सर्व’साधारण झ्याप झ्याप बत्ती जाँदा हैरान भएका छन् । विद्युत् प्राधि’करणको फितलो व्यवस्थापनका कारण राज’धानीका विभिन्न स्थानमा दै’निक जसो नै बत्ती आउने जाने भइरहेको छ । यस्तै सम’स्या देशका अन्य प्रमुख सहरमा
बल्ल खुल्यो सचिनका बुबाको भित्री क’र्तुत, सचिनलाई यस्तो सम्म या’तना दिदा रहेछन्
April 20, 2021 admin समाचार 5727
सामाजिक सं’जाल मा भा’इरल भएका सचिन परियार को खोजि गर्दै उनकी आमा मि’डिया मा आएकी छिन्। घरमा श्रीमती हुदा हुदै पनि सचिन को बुबा तेजेन्द्र परियार ले अर्को बिहे गरे’का हुन्। तेजेन्द्र ले अर्को बिबाह